Real Estate Listings: » Business Directory » Design Services » Olona qeqesho luphezulu lweCCNA yoqeqesho lweZiko kwi-chandigarh1
Indawo yewebhu:: http://www.cnttech.org/
Ikhowudi yeposi: 160022
IiTekhnoloji ze-CNT zibonelela ngoqeqesho lweCCNA olugqwesileyo kwi-chandigarh .CCNA UKUHAMBELA NOKUFUNDA IKHALITHI ayisixhobisi nje kuphela kwitekhnoloji esisiseko, kodwa ikwaqinisekisa ukuba samkelwe kwetekhnoloji elandelayo. I-CCNA yenza ukuzithemba kwabafundi ngendlela yokumisela, ukuphatha kunye nokuxazulula iingxaki zonxibelelwano.Best ccna Training in chandigarh. Oku kwenzelwe ukukuxhobisela umsebenzi wokungena kwinqanaba kwaye ulungele ucelomngeni lobuchwephesha besizukulwana esilandelayo. emva kwale khosi uya kuba nolwazi olusebenzayo lokuhambisa nokutshintsha, Idilesi ye-IP, iProtokholi yokuSetyenzwa kwenethiwekhi. I-CCNA ayinazo iimfuneko zokuqala ccna sisifundo esisisiseko nesifunekayo kwinkalo yenethiwekhi kubandakanya iinkcukacha zendlela yomatshini otshintshela kuyo kunye nokusebenza .CNT inceda abafundi ukuba baqhube uvavanyo lwesiqinisekiso se-Cisco.
Nxibelelana nentengiso 0921633xxxx